Ciidamada huwanta oo 30km u jira Kismaayo, iyo Al-shabaab oo isaga-baxay magaaladaasi. – Radio Daljir
Seteembar 18, 2012 7:11 b 0
Kismaayo, Sept, 13 – Ciidamada dawladda Soomaaliya oo khaashanaya kuwa Kenya iyo ciidanka Raaskanbooniyiinta ayaa xilligaan 30 KM u jira magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose.
Talyaha guud ee ciidamada Jubbooyinka dawladda Soomaaliya Ismaaciil Saxardiid oo waraysi siiyay Radio Daljir ayaa sheegay inay ciidamadu gacanta ku dhigeen Jamacaal Cabdalla oo 30KM u jirta Kismaayo, taasina ay sababtay inay Al-shabaab magaaladaasi isaga guuraan.
Muddo 2 cisho ah ayaa waxaa hawada ka maqan idaacadii ku hadli jirtay afka kooxda Al-shabaab ee Andulus, waxaana jira warar tilmaamaya Al-shabaab inay shacabka ku dhaqan Kismaayo ay gacanta u galiyeen hub kale duwan, si ay iska caabin qarsoon dadkaasi u sameeyaan.
Waxaana la garan-karin saacada rasmiga ah ee ay gudaha u galayaan magaalada Kismaayo ciidamada hawanta ah, balse shacabka ku dhaqan Kismaayo ayaa cabsi iyo wal-wal xooggan ka qaba dagaal ka dhaca gudaha magaalada.